Wenza ezibukwayo ngowaya kagesi | News24
Wenza ezibukwayo ngowaya kagesi
UMnuz Nkosinathi Shezi onesifiso sokufundisa intsha umsebenzi wokucana. Izithombe: nosipho mkhize
OWESILISA waseMolweni onekhono lokwenza umsebenzi wokucana (craft) ngezintambo zika gesi uthi unesifiso sokuthi efundise intsha ngalomsebenzi ukuze ubonakale eNingizimu Afrika namaphethelo.
UMnuz Nkosinathi Shezi (47) uthi leli khono lwaqala esemncane eneminyaka eyi-19. “Akekho owangifundisa lomsebenzi ngangivele ngibuke imidwebo bese ngithatha uwaya kagesi bese ngakha izinto ezihlukahlukene zokuhlobisa endlini kubalwa ivazi, okokubeka amapeni nokunye,” kusho yena.
“Ngicele abe FEVER ukuthi bashicilelele lolu daba ukuze intsha yazi ngalo msebenzi futhi ngifisa ukuthola uxhaso lwendawo lapho engingafundisa khona intsha ngalo msebenzi. Okuhle wukuthi izingane ziyafundiswa ezikoleni ngobuciko namasiko.”
Uthe okumenze athande ukufundisa intsha wukuthi ubona indlela egxile ngayo ezidakamizweni ezingekho emthethweni nangendlela ewuvanzi ngayo emgwaqeni.
“Intsha kumele ifunde ukuthi kuningi engakwenza ukuze ingaphendukeli ezidakamizweni ezingekho emthethweni. Kunezinto eziningi engazenza ikakhulukazi imisebenzi yezandla, ukungenela amaqembu asinayo, ukucula nokukunye,”kusho uMnuz Shezi.
Uthe okusikona kodwa lokhu akwenzeyo njengoba ezibona njengo muntu okhuthele. “Ngaphandle kokwenza lemihlobiso ngibamba amatoho okupenda izindlu ngibuye ngifake ama-tiles. Ngiwumuntu othanda ukubuka ibhola lezinyawo uma ngisekhaya.”
Uyale intsha wathi ayisukume izithathe ingaphuthelwa amathuba enikezwe wona empilweni.
“Intsha inikeziwe amathuba, kuphela nje kumele iwasebenzise ngendlela efanelekile. Kumele ifunde okuningi okuzoyiphilisa ingajwayeli ukucela ngaso sonke isikhathi kodwa kufanele ifunde ukuzimela. Abantu abangangami bafundiswa besebancane ukuzimela ngakho nabo ababukele kubantu abakhulile benza kahle empilweni, ayisukume yenze okuhle emphakathini ngoba intsha iyizimbali zakusasa,”
Uma kufa izimbali zalelizwe kufana nokuthi isizwe sonke sifile. Intsha iyithemba lethu,” kusho uMnuz Shezi.
Uma kukhona othanda ukuxhasa uMnuz Nkosinathi Shezi ngomsebenzi wakhe angashayela inombolo ethi: 084 784 2894